အကိုကြီးရေ စိတ်လျှော့ စိတ်လျှော့..
နေ့တိုင်း သောကြာနေ့ မဖြစ်ဘူးလေ။
အကို့ကို မုန်းလို့ ကားပေါ်မှာ စာရေးတာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ။ တချို့လူတွေက လက်ဆော့တတ်တယ်။ သတိတော့ ထားပေါ့။
ကုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေကို နှမြောပြီး ဒေါသထွက်ရင်း အချိန် ထပ်မကုန်ပါစေနဲ့နော်။
ကျိုင် ....ယင် ယင် အန်ကယ်ရေ့ မိတ်မီပဟာလေး) ဟားဟား ကျနော့်တစ်ယောက်တည်း ပေါက်ကွဲနေတာလားလို့ ခုတော့ အဖော်ရပြီး အားတက်သွားတယ်ဗျို့ ။
အိမ်ရောက်တာနဲ့ အင်တာနက် တန်းဖွင့်တော့တာပဲ.. ဆိုတဲ့ စကားကို... သက်ဝေလဲ မုန်းတယ်...။
ဒီနေ့ တော့ အစ်ကို့ အတွက် ပျော်ရွှင်သောနေ့ ၊ အဆင်ပြေသောနေ့ ဖြစ်ပါစေဗျာ။
ပေါက်ကွဲ စရာတွေ ပေါက်ကွဲ လိုက်တော့လဲ ပြီးတာပဲ မို့လား..
ရင်ထဲ သိမ်းထား တတ်သူတွေက ပို ပင်ပန်းတယ် လေ..
ပေါက်ကွဲ ပုံလေး က မိုက်တယ်...း)..
တစ်ခါ လောက် ပေါက် ကွဲ စမ်းကြည့် လိုက်ဦးမှ နဲ့
ဘ၀ ဆို တာကြီးကို တော့ မမုန်း လိုက်ပါနဲ့..
ဘ၀ က ရောင်စုံ ပန်းခင်းလေး ပါ..
မွှေးနေတဲ့ ပန်းလဲ ပါမယ်..
နှင်းပေါက် လေးတွေ နဲ့
ကွဲပြား ခြားနားနေတဲ့ ရာသီတွေ ကိုတော့
အလှည့်ကျ ဖြတ်သန်း ရမှာပေါ့.......
အင်း.... ပျင်းစရာကြီးပဲ နေမှာ....
(မိန်းမ ထမင်း မချက်ရသေးတော့လဲ...
တစ်ခါ တစ်လေ ၀င် ချက် ကြည့် ပါလား...း)
ဒါနဲ့ အေကေကြီးက အာကိုဂျီးဆီမှာပဲရှိနေတာလားးးးး ငှင်
အိမ်ရောက်တာနဲ့ အင်တာနက် တန်းဖွင့်တာပဲ...:D
( အဟဲ- စိတ်တိုပြီး.. ရော အော်ခံနေရအုံးမယ်..အသာနေမှ- ဘွာတေး )
စိတ်လေး ဘာလေးလျော့လေ...Bro! ... တခါတလေ ထင်တာနဲ့ မြင်တာ လွဲတယ်လို့မှတ် ... ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာ ပျော်စရာကြီးပေါ့....။
ဟဲဗီးမက်တယ်တွေ အကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီးလိုက်အောင်ဆိုလိုက်တာ ကေကာင်းတယ် အစ်ကို.
အထူးလျှော့ဈေးဖြင့် ကားဆေးမှုတ်ပေးနေသည် မူလဆေးရောင်အတိုင်းဖြစ်စေရန် အာမခံသည် ခရစ်စမတ်ရာသီ နှစ်ထပ်လျှော့ဈေးဖြင့် ကားလျှပ်စစ်ကရိယာများကိုလဲ ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါရန်။ Sorry, just kidding,wanted to cheer you up from your plight.
၁ ကနေ ၁၀ ထိရေပစ်လိုက်ပေါ့
မရရင် ၁ ကနေ ၁၀၀.. ဟိဟိ...
တစ်ခါတစ်လေ အဲဒိဘ၀ဆိုတာကြီးက မုန်းပစ်တာပဲကောင်းတယ်...
ညကပြန်လာပြီး အင်တာနက် ချိတ်လို့ မရလို့ချစ်သူ ကို အထင်မှားမိသေးတယ်။ သူများလိုင်းဖြတ်ထားတယ်ဆိုပြီး။ ပြီးတော့မှ သူ့ဘာသာပြန်ကောင်းသွာယတယ်။ အဲ.ဒါလဲ ဒုတ်ခ.
အဝေးကနေပြီး ဘာမှမကူညီိနိုင်တာ စိတ်မကောင်းဘူး...
ညီမချိုသင်း - စိတ်လျှော့လိုက်ပြီ...း)
တူမောင်မျိုး - မိုက်မီပင်ဟာ... ချိုက်ဒီး...
သက်ဝေ - ဟုတ်ပါ့... နော်...
ကောင်းကင်ကို - ကျေးဇူး ညီရေ့...
ကိုနေ - အေးပါညီရေ့...
မမ - ထမင်းချက်တယ်... ဟင်းချက်တယ်... အ၀တ်လျှော်တယ်... ကြမ်းတိုက်တယ်... အိမ်သန့်ရှင်းရေးလည်း လုပ်တယ်... ဘာကျန်သေးလဲ...
မစ်ရာ - စိတ်လျှော့လိုက်ပြီ... ရေတော့... အနားမှာ... မရှိတာနဲ့... အနားရှိတဲ့... ဘီယာပဲ သောက်လိုက်တယ်...း)
စင်ဒန်လား - ခု စိတ်မတိုတော့ပါဘူးဗျာ...
ကိုမောင်ရင် - တရားအားထုတ်တော့မယ်ဗျာ...း)
မခင်မင်းဇော် - ထမင်း မရှိတော့... ခေါက်ဆွဲစားရတယ်လေ...း)
မကေ - အော... မခင်မင်းဇော်နဲ့... အဖော်ရနေပေါ့....
ဒုကဘာ - ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ... ပြီးသွားပါပြီ...း)
မနော် -စမ်းစရာမလိုဘူး... ကျနော်က... စားဖိုမှူးဗျ...း)
တူးတူးသာ - Heavy Metal တွေ ကောင်းမှန်း... ခုမှပဲ... သိတော့တယ်...း)
Anonymous - thanks you for cheering me up!
ခေါင်ခေါင် - အဲအချိန်က... ၁ ကနေ ၂ အထိ... ရေဖို့တောင်... စိတ်တိုနေတယ်လေ...း)
မခင်ဦးမေ - (ဒုက္ခ) လုပ်ပါဗျ... ဒုတ်ခ မဟုတ်ဘူး...း)
ကိုသစ် - ကျေးဇူးပါဗျာ... ပြီးသွားပါပြီ...း)
အဟား မိုက်တာကွ ငါတို့အစ်ကိုက၊ ခုရော အဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်...
သဘောကျသွားပြီ မဟေသီကို ထပေါက်ကွဲတယ် ထင်တာ ဒါလည်းကောင်းတာပဲ အကျိုးအမြတ်ကတော့ http://www.hardradio.com/streaming/hardradio.asx ဒီဟာတော့ မ သွားပါတယ်ရှင် ကျေးဇူး
စိတ်ကိုလျှော့ပါဆံရှည်ကိုယ်တော်။ အဆင်ပြေပါစေ အိမ်ရောက်တာနဲ့ အင်တာနက်တန်းဖွင့်တာဘဲလားး)
ဒီကလည်း အပြင်မှာ ဆိုရင်တော့ ဟန်တစ်လုံး ပန်တစ်လုံးနဲ့၊ အိမ်မှာတော့ ထစ်ကနဲဆို ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်တာ တစ်ခါတစ်ခါလွတ်သွားတာများ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မမှတ်မိဘူး ဟူးးး
လင်းဒီပ - ကျေးဇူး ညီရေ့...
ကိုဝင်းဇော် - ခုတော့ အေးဆေး...း)
Acacia - တခြား လင့်ခ်တွေလည်း ရှိသေးသဗျာ... ပေါက်ကွဲချင်ရင်...
လင်း - ဘလော့ စွဲနေပြီလား မသိ ...း)
sonata-cantana - ကျနော့်လိုပဲ စိတ်လျှော့လိုက်ပါဗျာ...း)
Hi Ko Aung,
I like ur music st: link. if can, can give me other good st link.....